२०७७ असार १६ मंगलबार ०७:००:०० प्रकाशित
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि मानिसहरुले स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न थालेका छन्।
तपाईं हामीले स्यानिटाइजरमा अल्कोहल अर्थात् मदिरा मिसिएको हुन्छ भने सुनेका छौं। हामी सबैलाई थाहा छ, स्यानिटाइजरको प्रयोगले हाम्रो हातमा भएका भाइरस र ब्याक्टेरियालाई मार्छ।
अल्कोहल मिश्रित स्यानिटाइजरले हातमा भएको संक्रमण गराउने भाइरसलाई मार्न सक्छ भने अल्कोहल सेवनले शरीरभित्रको भाइरसलाई पनि त मार्न सक्छ नि भन्ने धारणा धेरैमा पाइन्छ।
तर, विज्ञहरुका अनुसार यो धारणा गलत हो ।
लकडाउनको समयमा पनि यही हल्ला सुनेपछि कतिपय मानिसहरुले मदिरा पसल खोल्नुपर्ने माग राखेको सुनिएको थियो। यस्तो भम्र छिमेकी देश भारतमा समेत फैलिएको थियो। कोरोना भाइरस भगाउन विषाक्त मदिरा सेवन गरेपछि इरानमा ७ सय मानिसको मृत्यु भएको इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्दृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। मदिरा सेवनले त्यहाँ ५ हजारभन्दा बढी मानिस बिरामी परेका थिए।
के मदिरा सेवनले कोरोना भाइरसलाई साँच्चिकै मार्छ ? कतै हामी हल्लाकै भरमा थप जोखिममा पर्ने गरी मदिरा सेवन गरि शरीरलाई जोखिममा पारिरहेका त छैनौँ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईका प्रमुख समीरकुमार अधिकारी शरीरमा भाइरस वृद्धि हुने ठाउँ र मद्यपान सेवनपछि मदिरा शरीरभित्र जाने ठाउँ फरक भएकाले मदिराले भाइरस मार्ने कुरा गलत भएको बताउँछन्।
नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा जोस भ्यान्देलियरले मदिरा सेवनले कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट बचाउने कुरा गलत भएको बताए।
वीर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा अशेष ढुंगाना मदिरा सेवन गर्ने व्यक्ति झन् कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहने बताउँछन्। उनका अनुसार मदिरा सेवन गर्दा मदिरा शरीरमा जाने बाटो र भाइरस जाने बाटो फरक भएकाले मदिरा सेवनले कोरोना भाइरस मर्छ भन्नु गलत हो।
महामारीको समयमा सही सूचना दिनु भनेको कुनै पनि रोगविरुद्दको खोप दिनुसरह हो । तर, यो समयमा गलत र भ्रमको पछाडि लाग्दा त्यसले झनै खतरा निम्त्याउने गर्छ । विपदको समयमा हामी कसैले भनेका वा कतै सुनेका हल्लाका भरमा नै धेरै कुरामा सजिलै विश्वास गर्छौं । त्यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छ कि छैन भन्ने विचार गदैनौँ ।
अझैसम्म पनि संसारमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने वा संक्रमण रोक्ने कुनै औषधि वा खोप पत्ता लागिसकेको छैन । यसका लागि थुप्रै प्रयासहरु भने भइरहेका छन्।
त्यसैले आधिकारिक निकाय, आधिकारिक व्यक्तिको कुरा नसुनेसम्म विश्वासमा नपर्नु हुन अनुरोध छ।
हेटौंडामा बनेको भनिएको कोरोना विरुद्धको खोपको के हो वास्तविकता?
६. जिल्ला प्रशासनका एक अधिकारीसहित ४ डाक्टर चितवनबाट पक्राउ